January 27, 2021 Xuseen 6
Guddiga ka kooban 7 Xubnood ee urur Goboleedka IGAD uu u xil saaray xaqiiqio raadinta sababaha keenay khilaafka dowladda Soomaaliya & Kenya iyo tabashada ay gudbisay dowladda Soomaaliya ayaa qodobo soo saaray, iyada oo qodobadaas ay soo dhaweeysay Dowladda Kenya.
War kasoo baxay dowladda Kenya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Warbixinta Guddiga, waxana lagu sheegay in warbixinta guddiga ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ay ka dhanka ah Kenya ay yihiin “kuwa aan sal laheyn”.
“Annaga oo la shaqaynayna maamullada kala duwan ee Soomaalida, wax kharash ah kuma rabno in aan ka shaqayno xasilloonida Soomaaliya”, waxaana warbixintan ay cadeyneysaa in eedeynta Soomaaliya aysan waxba kajirin ay aalgu yiri” Qoraalka kasoo baxay Kenya.
Waxay kale oo intaas ay ku dartay Kenya inay caddeyn u tahay in go’aanka ay Soomaaliya xiriirka ugu jartay Kenya uu ahaa mid qiil laheyn oo saameyn taban ku yeeshey Soomaalida gargaarka iyo adeegyada kale u raaadsada Kenya, howlgalka Amisom iyo nolosha shacabka labada dal.
Zoomalia xidhiidhka ma u jari kartaa Jabuuti? Waa suaal weyn.
Tii Zoomalia Way galgalaneysaa waa Neef Gawracan.
Dal burburay iyo maafio tuuga wada ah oo qurbaha kasoo wada yaacay reerohoodiina soo dayacay ayaa meelahaa dowlad kaga sheekeeya.
Dowlad aan 5km xukumin iyadii adoontay ka dacwoonayaan Ilaaliyaan, dal iyo dad toona gacanta ugu jirin, musuqu xadhkaha goostay, maaha wax dowlad lagu sheegi karo.
Inay iska Pakistan ayaa u fiican qoladan vilada lagu hor joogo sidii Adhi La iib geynayo ADHI XARAAS,kkkkkkkkkkk
SULDAAN CALI says:
Inaksta oo aanan weli arag warbixinta, haddana Soomaaliya waa in ay dib u eegtaa ka sii mid ahaanshaha urur goboleedka TACBAANKA ah ee IGAD! Midda kale, maxaa sababay in guddigii xaqiiqa raadintu ay ugu dhowaan hal waddan ka yimaaddaan? Maxayse dawladdu u sheegi weyday xubinta wehelisay xubnaha 6 da ah ee reer Jabuuti? Ma laba taabtaankii ITOOBIYAA?
Haddaba, waxa aannu u sheegaynaa in uu madaxweynaha qaranku sameeyey khalad weyn iyo fudayd aan loo meel dayin markii uu Abiy & Itoobiya si indho la’aan ah iskaga dabagalay ee uu gidaar kasta kula kufay.
Waxa aannu ogayn in Abiy uu Ereteriya u kaxaystay, deedna judhiiba uu yiri waxa aan ka qaadnay cunaqabatayntii hubka, isaga oo aan wax tixgelin ah siinin Jabuuti, oo gobolka ku taalla muran xuduudeedna kala dhaxaysay Ereteriya. Waxa kale oo aannu ogayn in Abiy oo Farmaajo xanbaarsan uu haddana kala dul dhacay Kenya, oo uu muran na dhex yaallay!
Fudaydka intaas le’eg waa looga fiican yahay nin masuul ah, usagayna sumcad xumo ku tahay. Labada goorba dan qaran oo Soomaaliyeed kuma jirin sida aan aamminsanahay. Waxa aannuna ka codsanaynaa in madaxweynuhu uu wax ka barto khaladaadkaas hore uga dhacay oo uusan dib u samayn.
Si kastaba, waxa aan madaxweynaha sharciga ah ee qaranka Soomaaliyeed (ee min LAWYACADDO illaa LIBOOYE-SOMALIA) ugu hanbalyeynayaa in uu gaaray heer uu la niqaasho qaarkamid ah waddamada dersika ah iyo hawsha wanaagsan ee uu qaranka u hayo.
Waxa aan haddaba rajeynaynaa marka dib laguu soo doorto (haddii alle idmo) oo ay u badantahay in dib laguu soo doorto waayo wax ku dhaama saaxada laguma arko illaa iyo hadda, in aad wax ka barato jillaafooyinkii ay hore kuugu soo dhigeen qaar aad u magacawday Ra’iisal Waasarayaal & Wasiirro & Madaxa Sirdoonka, iyo hagarddaamooyinka waddamada dersika ah ee ay Jabuuti ugu danbaysay.
Waa in aad qorshe cad ka yeelataan ciidamada SAFKA HORE (Jabuuti, Kenya & Itoobiya) ee ka midka ah AMISOM. Waa in waddanka laga saaraa oo aan loo cusboonaysiin marka wakhtigoodu dhaco oo ku eg dhammaadka bisha ina soo haysa. Horay Soomaalidu u tiri, “nin abeeso koriyoow adigaa u aayi, axdi malaha Itoobiya lagu aammino.” Shicibka badankiisu weli waa ku taageersanyihiin, laakiin waa in aad is toosisaa.
Zoomaliya wax awood uma laha in wax ka tiraahdo in IGAD si joogto iyo in kale waxbana laga waydiin maayo horena loogama waydiin waxaa go,aankaa iska leh golaha amaanka UN .IGAD waxay ku joogtaa Mandet uu bixiyo Securty Consel UN , markaa Zomalia waxay ka dhigan tahay in waalan oo geed lagu xidhay silsilo waawen,Sababtoo ah wuu is dhibaatayna dadka la deriska ahna waxa uu ku hayaa dhibaato weyn, waxaa lagu xukumaa sharciga la yidhaahdo Chapter 7 oo golaha amaanka.. Xikmadu waxay tahay nin waalan waa loo taliyaa ee isgu ma tashado.
Dad waalan oo Geed lagu xidhay iygu dhexdooda is dilaya is qaw qawracaya in uy sheegtaan dawladnimo waa waaali kale. waxaa la odhanayaa markaa way ka sii dareen ku sii haya meesha ciidamada ilaalinaya u soo badiya, silsilado kale ku sii xidh xidha.
Waa wax aad u fudud loo fahmi karo hadii IGAD ay baxdo waxa ugu horeeya ee dhici kara. maamulka yar ee kab kabka ah ee UN ka dhistay Villa Wardhiiglay 2 cisho ma sii jiri karaayo. kala cararaay ayaa bilaabmaysa.